Poco X3 GT: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Androidsis
Xiaomi Poco X3 GT: igwe eji egwu egwu ohuru nwere ihuenyo 120 Hz na Dimensity 1100
Aaron Rivas | 29/07/2021 09:55 | Mobiles, Noticias
Xiaomi ewepụtala ekwentị ọhụrụ n'ahịa maka ngalaba egwuregwu, ọ bụkwa ya Obere X3 GT. Ngwa a nwere ọtụtụ ihe ọ ga -enye, na -amalite site na ngosipụta ume ọhụrụ 120Hz iji nyefee onyogho dị larịị ma dịkwa larịị, mgbanwe na ihe nkiri.
Ngwa a na -abịakwa chipset processor Mediatek, nke na -abụghị nke ọzọ 1100 diiri, otu n'ime akụkụ kachasị ike nke onye nrụpụta semiconductor Taiwanese. A na -agbasawanye atụmatụ na nkọwa niile fọdụrụ n'okpuru.
1 Ihe niile gbasara Poco X3 GT ọhụrụ, ngwaọrụ dị ọnụ ala nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga -enye
Ihe niile gbasara Poco X3 GT ọhụrụ, ngwaọrụ dị ọnụ ala nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga -enye
Maka ndị mbido, Poco X3 GT ọhụrụ na -abịa ihuenyo nke bụ teknụzụ IPS LCD ma nwee diagonal 6.6-inch. N'aka nke ya, ihe nlereanya a nwere pikselụ FullHD + nke pikselụ 2,400 x 1,080 ma jiri iko Gorilla Glass Victus kpuchie ya, nke kachasị ọhụrụ na nke siri ike site na Corning.
N'aka nke ọzọ, ekwentị na-abịa na Mediatek's Dimensity 1100 processor chipset, dị ka anyị kwurula na nkenke na mbido. Akụkụ isi asatọ a na-arụ ọrụ na kacha elekere elekere nke 2.6 GHz ma nwee nha nke 6 nm. Na mgbakwunye, ọ na -esonyere ya RAM nke 8 GB na ebe nchekwa 128 ma ọ bụ 256 GB. Ihe ga -efu na ngwaọrụ a bụ mmụba site na oghere ebe ọ nweghị nkwado maka kaadị microSD.
Banyere sistemụ foto, Xiaomi's Poco X3 GT na -abịa sistemụ igwefoto okpukpu atọ nke nwere isi ihe mmetụta 64 MP nwere oghere f / 1.8, onye na-agba ụta nke nwere nnukwu oghere maka foto 8 MP sara mbara nwere oghere ihu 120 na oghere f / 2.2, yana oghere macro 2 MP maka foto dị nso. N'ezie, ọdụ ụgbọ mmiri a na -abịa na ndekọ vidiyo na mkpebi 4K na okpokolo agba 30 kwa sekọnd (fps) yana, maka selfies na ndị ọzọ, o nwere igwefoto n'ihu 16 MP nwere oghere f / 2.5 nke dị n'ime oghere ihuenyo.
A na -enye nnwere onwe nke ekwentị a site na nnukwu batrị nwere ikike nke 5,000 mAh. Nke a dakọtara na a 67W ngwa ngwa na-ebu teknụzụ nke na-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ site na ihe efu ruo na ihe dị ka nkeji iri anọ na anọ site na ntinye USB-C.
Ngalaba njikọta ekwentị a nwere nkwado maka netwọ 5G NA na NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 obere oriri, GPS, A-GPS na GLONASS. Ọ na -abịa na mgbawa NFC maka ịkwụ ụgwọ akpaghi aka (enweghị kọntaktị). N'otu oge ahụ, n'ihe gbasara sistemụ arụmọrụ, ọ na -abịa na gam akporo 11 n'okpuru nhazi nhazi MIUI 12.5 maka Poco.
Njirimara ndị ọzọ gụnyere onye na-agụ mkpịsị aka n'akụkụ, ndị na-ekwu okwu stereo, ntinye jack 3.5mm, na Techonology Liquid Teknụzụ 2.0 jụrụ oyi iji gbochie ekwentị ikpo oke ọkụ mgbe ejiri ya gabiga ókè, ma ọ na-egwu egwuregwu dị elu ma ọ bụ ngwa chọrọ.
Obere X3 GT
IKIRU 6.6-inch IPS LCD nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2.400 x 1.080 na ume ọhụrụ 120 Hz / Corning Gorilla Glass Victus.
Nhazi 1100 diiri
Nchekwa n'ime 128/256 GB UFS 3.1
Gbanwee CAMERA Nke atọ: 64 MP na f / 1.8 (isi ihe mmetụta) + 8 MP (obosara obosara) + 2 MP (monochrome)
N'ihu CAMERA 16 MP nwere oghere f / 2.5
OS Android 11 nwere MIUI 12.5 maka Poco
UMUAKA 5.000 mAh kwadoro 67 W ngwa ngwa
Njikọ 5G. Bluetooth 5.2. WiFi 6. USB-C. NFC
OTU OGWU Nkwupụta ụda stereo
Poco X3 ọhụrụ dịlarị na mpaghara ụfọdụ, mana ọ bụghị na Europe. Na ajụjụ, ọ mara ọkwa site Chinese emeputa maka Africa, Latin America, Asia na Middle East. Ugbu a amabeghị mgbe ọ ga -erute n'ahịa Europe yana, yabụ, Spain.
Poco X3 GT nwere 8 GB nke RAM yana 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime: 299 dollar (ihe dị ka euro 255 na ọnụego mgbanwe ugbu a).
Poco X3 GT nwere 8 GB nke RAM yana 256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime: 329 dollar (ihe dị ka euro 280 na ọnụego mgbanwe ugbu a).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Poco X3 GT: igwe eji egwu egwu ohuru nwere ihuenyo 120 Hz na Dimensity 1100
Top 10 na-agba ọsọ ngwa